४ कोठे घर बनाउन कति खर्च लाग्छ गिटी-बालुवामा? – ईमेची डटकम
Posted byइमेची संवाददाता January 17, 2021 Leaveacomment on ४ कोठे घर बनाउन कति खर्च लाग्छ गिटी-बालुवामा?
‘सिजनका बेला भए पनि ठूला निर्माण क्षेत्र ठप्प छन्। साना तथा निजी निर्माणले मात्रै क्रसर उद्योग धानिन सक्दैन,’ महासचिव रेग्मीले भने, ‘उद्योग चलाउनकै लागि व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धामा छन्। माग कम भएपछि मूल्य घटाएर भए पनि बजार टिकाइरहेका छन्।’
त्यस्तै ‘डबल वास’ बालुवामा पनि पहिले प्रतिटिपर ३२ हजार नै पर्थ्यो। अहिले ४ हजार रूपैयाँ कम भएर २८ हजारमा निर्माण स्थलसम्म पुग्ने रेग्मीले जानकारी दिए।
‘चार आनामा बन्ने चार कोठे ढलान घर फिनिसिङ गर्न ५ लाख लागत छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। ७ टिपर गिटी र ८ टिपर बालुवा भए सबै समेट्न सकिन्छ,’ जानकारी दिँदै खतिवडाले भने, ‘ढलानका लागि राम्रो बालुवा चहिन्छ। डबल वास बालुवा राम्रो मानिन्छ। प्लास्टरका लागि सामान्य बालुवा भए पनि हुन्छ।’
‘छतमा जस्ता वा टयाल प्रयोग गर्ने हो भने एक तिहाइ गिटी-बालुवा कम गर्नुपर्छ। बाँकी काम ढलान गर्ने र जस्ता लगाउने दुवै घरमा उसैगरी गर्नुपर्छ,’ खतिवडाले भने।
‘७–८ घन्टा मात्रै टिपर चल्न पाउँछन्। २४ घन्टामा एक ट्रिपभन्दा ढुवानी हुन पाउँदैन। श्रम खर्च बढी भइरहेको छ,’ महासचिव रेग्मीले भने, ‘यो नियमले व्यवसायी, टिपर चालक, घरधनी सबैलाई समस्यामा पारेको छ।’
‘टाइम कार्ड दिएर वा अरू नै उपाय लगाएर २४ घन्टा टिपर चलाउन दिने हो भने निर्माण सामग्रीको मूल्य धेरै सस्तो पर्छ,’ महासचिव रेग्मीले भने।सेतोपाटीबाट
Posted byइमेची संवाददाता January 17, 2021 Posted inब्यानर न्यूज, समाचार